Codsiyada Shatiyada Xannaanada Cannabis ee Cannabis Edibles & Cabitaannada
Ruqsadaha Jadeecada ee Soosaarayaasha Xashiishadda ee Illinois
Muxuu sharcigu ka leeyahay Ururada Infuser ee Soo-saaridda Xashiishadda ee Illinois?
An Shatiga waa xarun si toos ah ugu biirta xashiishadda cannabis wax soo saar si looga sameeyo sheyga cannabis-ku soo kordhay. Xarumahan waxaa shatiyeysan doona waaxda Beeraha waxayna u baahan doontaa inay fuliso dhowr shuruudood si ay u hesho laysan hawlgal ah.
Soosaarka Cannabis Mararka qaar Waxay Dib U Soo Noqon Kartaa Malab
Hoos waxaan ku eegaynaa qaar ka mid ah shuruudahaas. Waxaan sidoo kale dabooli doonnaa shuruudaha uu sharcigu dhigayo kuwa raadinaya inay dejistaan ​​ruqsad aan ruqse u lahayn ururada xashiishadda.
Bixinta Shatiyada Xannaanada Cannabis
Bilowga Luulyo 2020, waaxda beeraha waxay soo saari doontaa ilaa 40 ruqsad ururin ah. Codsiyada liisamada ayaa bilaabmi doona Janaayo 7, 2020 daaqadda dalabkana waxay xirmi doontaa ugu dambeyn 15-ka Maarso 2020.
Dhamaadka sanadka 2021, waaxda beeraha waxay soo saartay ugu badnaan 60 ruqsad ururinta liisanka ah. Taariikhdan kahor, waaxdu waxay qaadan kartaa xeerar beddalaya lambarkan.
Tallaabooyinka qaar waaxda ay qaadi karto si loo kordhiyo tirada codsadeyaasha ruqsad siinta ardayda waxaa ka mid ah, "In wax laga beddelo ama kor loo qaado tirada shatiyadaha infuser iyo in la beddelo ama la beddelo habka codsashada shati si loo yareeyo ama loo baabi'iyo caqabadaha."
Dhowr arrimood oo ay Waaxda Beeraha tixgelin siin doonto iyada oo la kordhinayo ama dhimaysa tirada shatiyadaha infuser-ka ayaa waxaa ka mid ah:
Waxa jira dawooyin cannabis oo aan ku filnayn ama xashiishad cannabis ku filan oo buuxisa baahiyaha bukaannada cannabis caafimaad.
Keenista dawooyinka loo isticmaalo cannabis ma buuxin karto baahida loo qabo isticmaaleyaasha caafimaadka iyo madaddaalada labadaba
Khatar ah inuu ku soo biiro ururo badan oo karti leh ama aasaasida ururadaas meelaha qaarkood
Walaacyada amni ee laga diiwaangaliyay dhamaan ururada samafalka
Isbedel ku yimaada sharciga federaalka ee u baahan kordhinta ama yareynta ururada khaaska ah
Waaxda Beeraha ma laha awood ay wax kaga qabato ururada khaaska ah.
Codsiyada laysanka hay'adda liisanka waxaa lagu sameyn doonaa qaab elektiroonig ah. Markii la gudbinayo arjiga, waxyaabaha soo socda ayaa loo baahan yahay:
Waa lacag aan la soo celin karin. Ilaa Janaayo 2021, lacagtaani waxay noqon doontaa $ 5,000. Taariikhdaan wixii ka dambeeya, waaxda beeraha waxay dejin kartaa qaddar kale oo ka sarreeya ama ka hooseeya. Lacagtaan waxaa lagu shubayaa sanduuqa maareynta xashiishadda
Magaca sharciga ee cunugga, cinwaanka jir ahaaneed ee lasoo jeediyay, iyo magacyada iyo cinwaanka dhammaan xubnaha guddiga iyo mas'uuliyiinta sare
Warbixin dhammaystiran oo ay la socoto, "faahfaahinta hawl kasta ee maamul ama garsoor oo mid kasta oo ka mid ah saraakiisha sare ama xubnaha guddiga soo galayo.
(i) lagu xukumay dambiile, la xukumay, la ganaaxay, ama laga joojiyay diiwaangelin ama laysan shati ama laga noqodo, ama
(ii) loo maareeyay ama loo adeegsaday guddiga ganacsiga ama urur aan macaash doon ahayn oo ballanqaaday inuu dambiile yahay, la xukumay, la ganaaxay, ama la xayiray diiwaangelin ama laysanka laga joojiyay ama laga noqday "
Qawaaniinta ku shaqeynta sharciga ee uu gacanshuhu ku dhaqmi doono waxaa ka mid ah nidaamka korjoogteynta, qorshaha amniga, iyo qorshaha shaqaaleynta
Khibrad soosaarka warshadaha cannabis, iyo sharraxaadda tilmaamaya codsadayaasha khibradahooda ka shaqeynta jikada ganacsiga ama sheybaarka halkaas oo soosaarka loogu talagalay isticmaalka bini'aadamka.
Qorshe faahfaahsan oo ku saabsan sida sabuushu wax uga qaban doonaan baahiyahiisa tamar, baahi biyo, iyo maaraynta qashinka
Waaxda Beeraha ayaa laga yaabaa inay uxuuxiso dalabka hay'ad daciif ah sababahan soo socda:
Codsaduhu ma uusan siinin macluumaadka loo baahan yahay oo dhan. Mararka qaar, “Haddii waaxda Beeraha ay hesho codsi ay kujirto macluumaad maqan, Waaxda Beeraha waxaa laga yaabaa inay soo saarto ogeysiin la'aani codsadaha. Codsaduhu waa inuu haystaa 10 maalmood oo taariikhi ah laga bilaabo taariikhda ogeysiinta la'aanta si dib loogu gudbiyo macluumaadka aan dhameystirneyn. ”
Haddii codsaduhu ku guuldareysto inuu soo gudbiyo macluumaadka oo dhan xitaa ogeysiiskan ka dib, dalabka ayaa loo qalmi doonaa.
Sidee loo Bixin Lahaa Liisanka Xannaanada Cannabis
Waaxda Beeraha waxaa looga baahan doonaa inay la timaado nidaam qiimeeya dalabka codsadayaasha ururka daneynaya. Kuwa hadafka ku dhibcaha leh dhibcaha ugu sareeya waxaa la siin doonaa liisanka hay'adda liisanka marka hore. Dhibcucu wuxuu ku salaysnaan doonaa macluumaadka uu codsadeha hay'adda garsoorku bixiyo, guud ahaanta abaabulka, iyo caddeynta foomka dalabka.
Waxyaabaha kale ee tixgelinta la siinayo waxaa ka mid ah:
Sida ugu habboon ee xarunta la soo jeediyey ugu habboon tahay
Ku habboonaanta qorshaha tababarka shaqaalaha
Diiwaan-gelinta iyo qorshaha amniga
Xaaladda sinnaanta bulshada
Hay'adaha samafalka ah ee qorsheynaya inay sidoo kale la shaqeeyaan bulshada waxaa la siin doonaa dhibco dheeraad ah. Urur infuser ayaa laga yaabaa inuu muujiyo rabitaankiisa ah inuu bulshada dhexgalo iyadoo, “kaqeybgalaya mid ama in ka badan, laakiin aan ku xadidneyn, ficilada soo socda:
(i) abuurista barnaamij soo-saare loogu talagalay in lagu kordhiyo kaqeybgalka warshadaha xashiishadda shaqsiyaadka uqalma sida codsadayaasha Sinnaanta Bulshada;
(ii) bixinta taageero maaliyadeed xarumaha daaweynta daroogada;
(iii) waxbarista carruurta iyo dhallinta ku saabsan dhibaatooyinka ka imaan kara isticmaalka daroogada xashiishadda; ama
(iv) tillaabooyin kale oo muujinaya u heelnaanta bulshada codsadaha ”.
Liisanka lama diidi karaa?
Haa, waaxda beeraha waxay xaq u leedahay inay diido dalab hadii ay dareemaan in codsaduhu uusan raacin habraacyada iyo shuruudaha loo dejiyey. Codsiga laysanka waa la diidi karaa haddii mid ka mid ah xaaladaha soo socda ay soo baxaan:
Dhamaan agabyada loobaahanyahay lama gudbinayo
Haddii codsaduhu uusan u hoggaansanayn qawaaniinta soonaha
Haddii mid ka mid ah xubnaha guddiga iyo mas'uuliyiinta sare ay ka yar yihiin da'da 21 sano
Ansixinta Hore ee Loogu Baahan Yahay Sharuudaha Liisanka Xarunta Quudinta Dadka Waaweyn
Shuruudaha Codsiga Ururka Xannaanada Cannabis
Waxyaabaha ay soo abaabulaan ururada waxaa looga baahan doonaa inay ku jiraan:
Dukumenti hawlgal oo dhammaystiran oo sharraxaya habraacyada agabka, nidaamyada kormeerka, haynta diiwaangelinta iyo qorshaha shaqaaleynta
Qorshaha amniga ee ay fulinayso ururada abaabulaya waa in boolisku dib u eegaa
Ka shaqeynta waxyaabaha cannabis soo galiyay ayaa lagu sameyn doonaa meel xiran. Gaaritaanka aaggan sidoo kale waa la xakamayn doonaa sida sharciga ku xusan.
Wax soo saarka cannabis ayaa loo qaybin doonaa oo keliya ururinta u fidinaysa
Ururka infuser waa ka mamnuuc inuu si toos ah ama si aan toos ahayn u takooro qiimaha marka laga iibiyo ururada kala duwan. Dhammaan alaabada ay sameeyeen ururada infuser ayaa looga baahan yahay inay tayo sarreyaan isla markaana qiime isku mid ugu yihiin iibsadayaasha dhammaantood.
Fikradaha kama dambeysta ah ee shatiga xashiishadda cannabis
Waxyaabaha kor ku xusan waa qaar ka mid ah shuruudaha uu dejiyey sharciga ee kuwa raadinaya inay dhisaan ururro karti leh. Waxaa jiri doona shuruudo badan maadaama waxyaabaha la filayo inay isbeddelaan. Kuwa daneynaya inay ku soo biiraan warshadan waxay u baahan doonaan inay ka sii fogaadaan waxa dhacaya.
Si aad ugu guuleysato, waa inaad la xiriirtaa a Qareenka cannabis Ayaa kaa caawin kara inaad fahanto dhamaan shuruudaha loo baahan yahay si aad u dalbato laysan. Waxay hubin doonaan in dalabkaaga uu maro marka ugu horeysa. Qareen ahaan, sidoo kale way fududaan doontaa in la sii wado ka shaqeynta si sharciga waafaqsan.
Ruqsadaha infuser - midka aad hesho haddii aad rabto inaad macaash ka sameyso Illinois faa'iido.
Hey, waan ahay - i raadso aniga oo xanaaqsan qareenka cannabis isla markaana aado boggayaga qareenka sheybaarka cannabis si aan u waydiiyo su'aal kasta oo kooxdaada ka haysata. Iyada oo laysanka infuser - mowduuca maanta - Illinois uu sameeyay wax xoogaa ka duwan rukhsadaha processor-ka ee ka dhaca galbeedka - waxaan si xoog leh ugu quusin doonnaa- markaa isku dheji oo waxaan kuu sheegi doonaa sida loo helo adeegyada soo-saaridda ee laga yaabo inaad ku wareerto. waxay ku timaadaa shatiga infuser.
Markaa iska qor, su'aal ka bixi faallooyinka, oo na sii suulka oo aan rajeyno inaan kugu aragno Arbacada wararka Sharciyeedka - laakiin hadda, aan ku dhex galno laysanka Infuser.
Waaxda agta ee Illinois waxay soo saari doontaa 40 shatiyo infuser ah bisha Luulyo ee 2020, iyo 60 kale marka la gaaro Diisambar 2021. Ma ogin inta ruqsad la siin doono wixii ka dambeeya 2022 - laakiin waxay umuuqataa inaysan xad u laheyn sharciyada ay badashay waaxda ag ka dib. taasi. Waxay kuxirantahay saadinta alaabada noocaas ah ee infakshanku kufilan yahay - taasoo aan filayo inay tahay inaan sugno oo aan aragno sida ay macaamiishaadu u dejinayaan. Ma iibsan doontaa
Keega Hawsha? Shukulaatada cagaaran? Xanjiryada galmada, nacnac adag - ama heerka dahabka aniga ahaan ... Lagunitas cusub THC-brau. HiFi hops - oo hadda ku nool California, Colorado - iyo laga yaabee in 2021 - Illinois sidaad ogtahay Lagunitas waxay leedahay qol musqul oo ku yaal aagga Chicagoland.
Xusuusnow - laysanka infuser waa kan ugu jaban marka laga hadlayo khidmadda laysanka ee ay soo rogtay gobolka. Waa 5 weyn in la dalbado, ka dibna 5 lagu guuleysto - ka dibna waa $ 20,000 oo khidmad ah wixii intaas ka dambeeya.
Codsiyada ayaa soo bixi doona bisha Janaayo ee 2020, waxaan rajeyneynaa inaan heli doonno sharciyo badan - laakiin waxaan ku aragnaa waxyaabaha ugu waaweyn ee ku jira arjiga sharciga laftiisa.
Taasi kama duwana kuwa kale shatiyada xashiishadda. Waxaad ubaahantahay inaad sameyso sheegitaanno iyo qorshayaal badan oo ku saabsan sida ay shirkaddu ushaqeyso, u keydiso diiwaannada, qorshaha shaqaalaha, qorshayaasha amniga iyo la socoshada. Waa inaad sheegtaa wixii maamul ama nidaam garsoor ah, waa inaad kujirtaa cashuurahaaga iyo masruufka caruurta, inaad eegto asalka. Aqoonsiga qof kasta oo leh inka badan 5% shatiga. Sidoo kale sharax habdhaqanka shaqada ee aad soo jeedisay -
Halkan waa meesha Calaamadda 'Illinois ee sumcadda bulshada ee warshadaha xashiishadda oo ka tarjumeysa tirada dadweynaha gobolka - dhaqamadaas shaqo helistu waxay ahayd inay muujiyaan sida ay shirkadaadu u ogeysiinayso, u shaqaaleysiinayso, wax u bari doonto - dadka laga tirada badan yahay, haweenka, askarta ruug-caddaa ah, dadka naafada ah oo leh dhaqanno shaqo oo caddaalad ah iyo ilaalinta shaqaalaha.
Dheeraad ah - waa inaad muujisaa khibrad ku saabsan ama dhaqan ganacsi oo kor u qaadaya awood siinta dhaqaale ee aagagga ay saamaynta ku yeelanayso. Khariidadahaani waxay asal ahaan la mid yihiin saboolnimada magaalooyinka ee gobolka - waxay tilmaameen gobolka iyo khariiddada rasmiga ah waxay kujirtaa shabakadda DCEO websaydhka. Codsaduhu sidoo kale wuxuu leeyahay 20% dhibcaha asaga oo ku saleynaya inay yihiin codsade sinaanta bulshada.
Kadib dalabka wuxuu dib ugu laabanayaa heerka ugu yar ee uqalmitaanka cunuga - waxay ubaahanyihiin inay sheegaan faahfaahinta xarunta xirxiran halka xashiishadda lagu keydin doono. Waa inaad sharaxdaa waaya-aragnimadaada ka shaqeysa jikada ganacsiga ama sheybaarka samaynta bini-aadamka si loo isticmaalo bini-aadamka. Kadib liis garee shahaadooyin kasta ama shahaadooyin iyo khibrad laxiriirta adiga iyo kooxdaada oo aad ku leedihiin meheradahan la xiriira cuntada.
Markaa adiga, sida kuwa wax soo iibsada farsamo yaqaanku waa in ay sharxaan qaar ka mid ah dhaqanka deegaanka iyo cagaarka si ay kaaga caawiyaan in ay ilaashadaan tamarta shirkaddaada.
Gool dhalintu waxay u sii dheertahay sidii farshaxanku u sii kordhayo iyo sidoo kale qodobbada loo bixiyo:
Ku habboonaanta xarunta - markaa haddii aad u maleynaysid inaad ugu rakiban tahay xaruntaada - jooji iskuday. Hubso waxaad rabto inaad sameyso - dhismuhu waa wanaagsan yahay, sugan yahay, tamarna u yahay sida loo yaqaan 'heck'.
Ku habboonaanta qorshaha tababarka shaqaalaha - hel khibrad
Amniga iyo siyaasadaha haynta diiwaangelinta - laf dhabarta warshadaha- waxaa sidoo kale ku jira 24 saac kormeerida AV.
Badbaadada badeecada iyo qorshaha sumadaynta - lagu hubiyo inaad uqalmi karto qaddiyadaha si sahal ah iskuna dayi kartaa digniinta THC iyo weelasha caddeynta ilmaha.
Qodobbada sinnaanta bulshada
(dhibco yar -2% sidaas) Goobaha bay'ada, qorshaha kala duwanaanta, Illinois iyo milkiilayaasha halyeeyada & wacyigelinta bulshada ee xiriirka.
Ilmuhu wuxuu lahaan karaa oo keliya “alaabada ceeriin” marka laga hadlayo xashiishadda (cannabis) - oo uu sharcigu qeexayo sida soosaarka ay rabaan inay ku soo kordhiyaan waxsoosaarkooda.
Xaqiiqdii sharcigu wuxuu ka mamnuucayaa dhallaanka in ay fuliyaan soo saarida xashiishadda cannabis ubax ee sida caadiga ah lagu qeexo processor-ka gudaha warshadaha. (410 ILCS 705 / 35-25 (n) -
Si kastaba ha noqotee, waaxda Ag ayaa laga yaabaa inay maalin un furto liisanka processor-ka si ay u sameyso soo-saareyaasha noocaas ah - sida sharciga infuser uu oggol yahay taas, laakiin isla mar ahaantaasna - moodhalka caadiga ah ee shatiga shatiga infuser ma leh qayb soo saar - taas oo ah inaad u baahan tahay ruqsad farsamo korodhsi - si google taas.
Laakiin haddii aad rabto inaad waxyaabo cajiib ah la sameyso THC ayaa kugu soo kordhisay - xor ayaad u tahay inaad jeceshahay oo aad rukumo ama aad igu soo booqato qareennada warshadaha cannabis adoo googling Qareenka cannabis ama “laysanka infuser” waxaanan rajeynayaa in adiga iyo anigu aan ku raaxeysanayno soosaarida canunis Lagunitas marka la gaaro 2022.
Sida Loo Ballaariyo Diiwaankaaga
by Lauryn | Sep 14, 2020 | Sida Loo Ballaariyo Diiwaankaaga, Dadka waaweyn ee Illinois isticmaala xashiishadda
Sida loo Baahiyo Diiwaankaaga Kordhinta diiwaankaaga waa habka lagu burburiyo diiwaankaaga si aysan ugu muuqan shaqo bixiyaasha ama sharci fulinta. Toddobaadka ballaarinta qaranku waa Sebtember 19 - 26! Alex Boutros iyo Mo Will oo ka socda Cannabis Equity Illinois ayaa ku biiraya si ay ula hadlaan ...